'Sgbọ elu Pegasus nke Turkey na-ebupụta ụzọ ọhụrụ na Chisinau, Moldova
Home » Akụkọ ụgbọ elu » 'Sgbọ elu Pegasus nke Turkey na-ebupụta ụzọ ọhụrụ na Chisinau, Moldova
Pegasus ụgbọ elu, ụgbọ elu ụgbọelu na-ebu ọnụ dị ala nke Turkey, na-aga n'ihu bụ ịbawanye ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu ya kpọmkwem site na Antalya, Turkey na mwepụta nke ụgbọ elu ọhụrụ ọhụụ n'etiti Antalya na isi obodo Moldova, Chisinau. Gbọ elu mbido si Antalya gaa Chisinau ga-ebido na 23 Eprel 2021. flightsgbọ elu Pegasus 'Antalya-Chisinau ga-apụ na 22:30 oge mpaghara si Antalya Airport ruo Chisinau International Airport kwa Mọnde, Wenezdee na Fraịdee; ebe ụgbọ elu ga-apụ Chisinau International Airport na 03: 15 oge mpaghara gaa Antalya Airport ọ bụla Tuesday, Tọzdee na Satọde.
Pegasus ga-ejikọkwa ndị ọbịa na-efe efe site na Chisinau site na Antalya ruo Adana, Ankara, Istanbul Sabiha Gokcen, Kayseri na Trabzon na Turkey; na Amsterdam, Berlin, Beirut, Stockholm, Düsseldorf, North Cyprus-Ercan, Geneva, London-Stansted, Stuttgart na Tel Aviv na ntanetị ụwa.
Afọ nke njem njem: Ndị America dị njikere ịga njem na 2021, mana ọ bụghị site na ụgbọ elu